Ndeipi iri yepamusoro purogiramu yekutenga mari yemadhora? - Cazoo
musha » musha » Ndeipi iri yepamusoro purogiramu yekutenga mari yemadhora?
Tag: Binance, Binance app, Binance Android App, Binance iPhone App, Kutumira kwaBinance, Binance Referral ID, Binance Referral Code, zvivabatsire Code
Nguva yekuverenga: 4 minuti
Kana iwe uri kure nemusha uye uchida kubata rako ramangwana mari yemari yemari, iwe unozoda aAnwendung kutenga uye kutengesa cryptocurrencies kuti ishandiswe kuburikidza ne smartphone yako. Zvinorevei kutenga cryptocurrency? Kubudikidza nemari yako chaiyo unogona kutenga mari chaiyo (Bitcoin, Dogecoin, nezvimwewo), mari yecryptographic ine kukosha kwayo kunoonekwa nepfungwa dzakaomarara, izvo zvinoita kuti zvive zvakanyanya Zvinokanganisa. Kana mutengo weiyo cryptocurrency yawakatenga ukawedzera, unogona kutengesazve iyo cryptocurrency kuti iwedzerwe kukosha, uyezve kuisa mari yako nekuwanda kwemari kupfuura kare.
Kana ino inguva yako yekutanga kuverenga mitsara iyi, ndafara kusangana newe.
Pano tinotaura naCazoo nezve nyika ye crypto, kugovana zvinyorwa uye kudimbura newebhu. Ndiyo imwe nzira yekuzviita nepeni nebepa, uye zvinondibvumidza kubatsira avo vakaita seni, apo ini ndaive ndichiona mashandiro enyika ino, kuongorora webhu netariro yekuwana munhu anogona kutaura. kunwa.
Izvo zvakakosha kuti unzwisise kuti kuisa mari mu cryptocurrencies kune njodzi, nekuti unofanirwa kunge uine dzidziso yekutanga kujekesa magirafu uye kuchinja. Zvakare, yako capital inogona kuiswa munjodzi kana kukosha kweiyo cryptocurrency yawakatenga inodonha. Ini handisi chipangamazano wezvemari, uye handingambokuraira nezvekuti ungashandise sei mari yako. Ambuya, avo vakaisa mari pasi pemetiresi, havana kukanganisa. Kune rimwe divi, isu tine chokwadi chekuti mabhanga anogona kuvimbwa? Usakanganise zvandinotaura, kana zvinotaurwa nevamwe kune mazano - ita tsvagiridzo yako.
Ngatidzokerei kwatiri. Iwe unoda kutenga iyo cryptocurrency. Unoitenga yobva yadonha .. nei ichigona kudonha? Kune zvikonzero zvakawanda, uye zvikonzero zvikuru ndezvekuti: nekuti yakawandisa mari chaiyo inomhanya (saka inoderera), haichadiwe (saka hapachina kudiwa), nekuda kwemamiriro ezvematongerwo enyika (sezvazvinoitikawo mukudyara mumari yemari) kana zvekukanganisa, izvo zvisingatenderi kuongororwa kwakaringana kwemusika.
Chinhu chimwe chinogona kukubatsira iwe kuteedzera musika kubva kufoni yako. Unoda iyo Yakanakisa Anwendung kutenga cryptocurrencies kukwanisa kuongorora hupfumi hwako uye kuona kana paine chakashata kunyangwe usiri pamberi pePC. Mhinduro yakanakisa ndeye Binance.
SUBSCRIBE KU BINANCE Uine 20% DZIDZO
Yakanakisa Anwendung kutenga cryptocurrencies
Nebasa reBinance zviri nyore kutenga cryptocurrencies uye iwe unogona kuisa mari nekuchengeteka kukuru. Muchokwadi, pane yako Android smartphone kana iPhone, unogona kuve neyese data pane iyo cryptocurrency yawakatenga uye pane mamwe aripo munguva chaiyo.
Iyo app inowanikwa pane iyo Binance yepamutemo webhusaiti uye mune yepamutemo Play Store yeApple neApp Store ye iPhone. Inogona zvakare kushandiswa pamahwendefa nePads, zvinoenderana nesisitimu yekushandisa yaunoshandisa, inogara ichirodha pasi kubva kuzvitoro zviri pamutemo. Uye zvakare, iyo Anwendung yakabatana neBinance kuchinjisa chikuva. Izvi zvinoreva kuti, kana iwe wakanyoreswa pane saiti, unogona kushandisa zvakafanana humbowo paapp.
Paunenge uchiisa mari mumari yemadhora, imwe yenjodzi yaunotarisana nayo ndeye tora data rekunyepedzera nekuda kwekubira kwekubira kana dambudziko rehunyanzvi. Nebasa reBinance, iyi njodzi inobviswa! Muchokwadi, pamusoro pekugara uchiongororwa nepuratifomu yekuchinjana, iyo app inochengetedzeka zvakakwana uye inovimbisa zvachose kuvanzika, izere nehombodo inofanirwa kutungamirwa yakanangana neprofita yako yeiyo cryptocurrency exchanges.
Iyo app yakachengeteka senge kuchinjisa chikuva, uye zvakare ine makomisheni akafanana. Iwe haubhadhare yakawanda nekuti urikugadzirisa zvese kubva kuapp. Komisheni iri 0,2% yemari inotamiswa. Iwe unoda kuve ne20% dhisikaundi pane aya makomisheni pabasa rega rega raunoita? Bhalisa neichi chirevo changu chekutumira https://www.binance.com/en/register?ref=EV6X8DW5!
Chii chinonzi Binance
Binance inzvimbo yekuchinjana ye tenga uye tengesa macryptocurrencies. Mukati, mari yemuviri inoshandiswa chete kutanga uye kubvisa, asi mashandiro anoitwa kuburikidza ne cryptocurrency.
Ivo vanhu vanogona kugadzira yavo cryptocurrency paBinance, vachishandisa iyo ICO maitiro aripo pachikuva. Uye iyo yekutanga incubation chirongwa ichiita kuti zvikwanise kubudirira chizvarwa chitsva cryptocurrencies pamberi pevamwe.
Zvese izvi zvinowanikwawo paapp. Kuvhura account pa Yakanakisa Anwendung kutenga cryptocurrencies, ingo enda kuapp uye sarudza iyo "Nyoresa" sarudzo. Nekuzadza minda inodiwa kuti upinde uye ugamuchire iwo mamiriro uye mamiriro ebasa (uye isa chinongedzo chekutumira EV6X8DW5 kuwana dhisikaundi. Asi ndanga ndatozvitaura here?). Iwe unozogamuchira kodhi kuburikidza neemail, iyo yaunofanirwa kuteedzera uye kunama paapp kuti uone kuti ndiwe here wakanyoreswa. Panguva ino, iwe unozogona kuwana yako mbiri nehunyanzvi hwakapinda iwe pawakanyoreswa.
Binance, ari wepakati Shanduko, anokumbira zvitupa kuti uve nechokwadi chekuvanzika kwako uye kuchengetedza yako wega data. Nekudaro, chikuva chine chokwadi chekuti iwe unozoteedzera zvirevo zvemusika (sekuve zera repamutemo) uye kuti uri kunyatso kutengesa kuaccount yako. Ingo skrini skrini yerugwaro uye ongororo ine hunyanzvi hwekucherechedza kumeso maitiro uye maitiro acho anenge azere.
Kubatanidza chikwama chako kuaccount yako uye wotanga kuita mari neiyo cryptocurrency app, ingo enda kuaccount yako mushure mekupinda mukati Maitiro ekubhadhara anotambirwa nepuratifomu ndeaya:
yechitatu mapato ekubhadhara masisitimu.
Mari yakakoshesesa chaiyo iripo muBinance app ndeiyi:
Mune zvese, pane mazana mashanu emadhora anowanikwa.Uku kuwedzera kuchengetedzeka kweakaundi yako, unogona kukumbira 2FA mbiri-chinhu chechokwadi, uye ndinokukurudzira zvikuru kuti uite saizvozvo. Uye gara uchizviita, kunyangwe iwe uchinyoresa neAmazon! Uine mbiri-chinhu chechokwadi, mushure me password iwe unenge uine yechipiri kodhi yekupinda, iyo inozotumirwa kune yako smartphone, usati wapinda mukati, kana iyo yaunogadzira kubva kune kodhi yekugadzira app senge Google Authenticator. Kwete asi zvakakomba, kunyangwe paNetflix! Kwese kupi!
Zvisinei, kubva kuaccount iri mukati meBinance App unogona kutarisa nhoroondo yezvinhu zvese zvekutenga kweako cryptocurrency kutenga uye zvine chekuita nemadhipoziti ese. Binance haibhadharise chero mari yekubvisa, kungave paapp kana pawebhusaiti.
Kutanga ne Yakanakisa Anwendung kutenga cryptocurrencies, iwe unofanirwa kudaro kunyoresa, wobva watora Binance kubva kuzvitoro zvepamutemo uye pinda pasi rino, mune ino nhoroondo nhoroondo.
Nyaya yapfuuraBinance: Pakarepo kukwereta kiredhiti pamwe SEPA waya kuchinjisa
Nyaya inoteveraBhora kupa: chinja fiat & share. Pool Prize: 50.000 BUSD neBinance